Diniho ny fandehan-javatra » lay andriamialy
- famantarana cle ny hira
Accueil Actus Diniho ny fandehan-javatra
Actus humour malgachitudes Parodies
Ny orinasam-panjakana A dia faran’izay miroborobo. Tombom-barotra tsy hita pesipesenina no ampidiriny ao amin’ny kitapom-bolam-panjakana. Sambatra sy mirehareha ireo mpiasa ao aminy fa isan’ireo tafita. Ankoatra ny karama ambony dia mahazo tombotsoa izay tsiriritin’ny olona mihitsy izy ireo. Indrisy fa fotoana vitsy dia mitontongana ny hari-karen’ny orinasa A. Sarotra ny mahalala ny antony satria ny asa atao toy ny teo aloha ihany. Tsy fahaiza-mitantana hono e, gaboraraky ny mpiasa hono e, toe-javatra tsy voafehy hono e ! Mande ny feo fa mety hikatona ny orinasa ka mihorohoro ny mpiasa. Mandà mafy ny fanjakana fa tsy ao anaty eritreritra akory izany. Ireo hetsika sy ireo siosion-dresaka dia atao toy ny tsy misy. Rehefa tonga ny fotoana dia ampahafantarina fa efa namidy tamin’ny vahiny ny orinasa A.
Ny orinasam-panjakana B koa dia faran’izay miroborobo. Tombom-barotra tsy hita pesipesenina no ampidiriny ao amin’ny kitapom-bolam-panjakana. Sambatra sy mirehareha ireo mpiasa ao aminy fa isan’ireo tafita. Ankoatra ny karama ambony dia mahazo tombotsoa izay tsiriritin’ny olona mihitsy izy ireo. Indrisy fa fotoana vitsy dia mitontongana ny hari-karen’ny orinasa B. Sarotra ny mahalala ny antony satria ny asa atao toy ny teo aloha ihany. Tsy fahaiza-mitantana hono e, gaboraraky ny mpiasa hono e, toe-javatra tsy voafehy hono e ! Mande ny feo fa mety hikatona ny orinasa ka mihorohoro ny mpiasa. Mandà mafy ny fanjakana fa tsy ao anaty eritreritra akory izany. Ireo hetsika sy ireo siosion-dresaka dia atao toy ny tsy misy. Rehefa tonga ny fotoana dia ampahafantarina fa efa namidy tamin’ny vahiny ny orinasa B.
Ny orinasam-panjakana D moa dia faran’izay miroborobo. Tombom-barotra tsy hita pesipesenina no ampidiriny ao amin’ny kitapom-bolam-panjakana. Sambatra sy mirehareha ireo mpiasa ao aminy fa isan’ireo tafita. Ankoatra ny karama ambony dia mahazo tombotsoa izay tsiriritin’ny olona mihitsy izy ireo. Indrisy fa fotoana vitsy dia mitontongana ny hari-karen’ny orinasa D. Sarotra ny mahalala ny antony satria ny asa atao toy ny teo aloha ihany. Tsy fahaiza-mitantana hono e, gaboraraky ny mpiasa hono e, toe-javatra tsy voafehy hono e ! Mande ny feo fa mety hikatona ny orinasa ka mihorohoro ny mpiasa. Mandà mafy ny fanjakana fa tsy ao anaty eritreritra akory izany. Ireo hetsika sy ireo siosion-dresaka dia atao toy ny tsy misy. Rehefa tonga ny fotoana dia ampahafantarina fa efa namidy tamin’ny vahiny ny orinasa D.
Ny orinasam-panjakana E indray dia faran’izay miroborobo. Tombom-barotra tsy hita pesipesenina no ampidiriny ao amin’ny kitapom-bolam-panjakana. Sambatra sy mirehareha ireo mpiasa ao aminy fa isan’ireo tafita. Ankoatra ny karama ambony dia mahazo tombotsoa izay tsiriritin’ny olona mihitsy izy ireo. Indrisy fa fotoana vitsy dia mitontongana ny hari-karen’ny orinasa E. Sarotra ny mahalala ny antony satria ny asa atao toy ny teo aloha ihany. Tsy fahaiza-mitantana hono e, gaboraraky ny mpiasa hono e, toe-javatra tsy voafehy hono e ! Mande ny feo fa mety hikatona ny orinasa ka mihorohoro ny mpiasa. Mandà mafy ny fanjakana fa tsy ao anaty eritreritra akory izany. Ireo hetsika sy ireo siosion-dresaka dia atao toy ny tsy misy. Rehefa tonga ny fotoana dia ampahafantarina fa efa namidy tamin’ny vahiny ny orinasa E.
Fa io firenena io taloha tena faran’izay niroborobo. Tombom-barotra tsy hita pesipesenina no ampidiriny ao amin’ny kitapom-bolam-panjakana. Sambatra sy mirehareha ireo mponina ao aminy…dia hanao ahoana ny tohiny?
Article précédent Hira tsy fanadino : Ampitapitao!
Article suivant Tsy manan-kery tompoko ny vola 1 000 000 de dollars
Tsy rariny be dia be, BAD2014
Amin’izao BAD2014 (#BAD2014, Blog Action Day) izao izay miompana amin’ny &laqu…
Maka lesona amin’ny biby ratsy
Nalaza tato ho ato ny valala. Valala aman-tapitrisany no nandrakotra an’Antananarivo…
La bible et le Temps
Tout le monde rêve de revenir en arrière et d’effacer ses erreurs ou de saisir des …